Eps isaphulelo amaso amagwebu Ukwenziwa kunye nefektri | Xiong Ewe
Amaso amagwebu e-EPS aveliswa ngumatshini we-EPS pre-expander .Yinto emhlophe engqukuva eyenziwe ngamasuntswana eplastiki esinyukayo esongezwe kwi-petroleum i-gas engamanzi kwaye iqhutywa ngothotho lweenkqubo kubushushu obuthile.
Amasuntswana ayafana, i-microporous iphuhlisiwe, indawo ethelekisa inkulu, umthamo we-adsorption womelele, i-elasticity ilungile, ayiboli, ayophukanga, ubuninzi bayo buncinci, izinto zilula, kwaye zisetyenziswa ngokubanzi. Izixhobo zonikezelo lwamanzi ezinje ngezihluzi, kunye namaso okucoca amagwebu asetyenziswa ngokubanzi kumacandelo ahlukeneyo enqabileyo, izinto zokwakha, ukupakisha kunye namanye amashishini (kulula ukunyibilika kumaqondo obushushu aphezulu), ukugcwalisa izinto, unyango lwelindle, amanzi acocekileyo, ibhodi yekhonkrithi engasindi kwaye ivuliwe.
Ngonyango lwelindle elicocekileyo:
Isetyenziswa ikakhulu kwizixhobo ezincinci neziphakathi zokuhambisa amanzi, kunye nenkqubo yokuhambisa amanzi kwiinqanawa zangaphakathi, iindlela ezahlukeneyo zokucoca ulwelo, ukutshintshiselana nge-Ion, iValveless, i-Desalination, ukuBonelelwa kwaManzi eziDolophini, Ukucoca kunye nezinye iifayile zamanzi amdaka.
Ngokubanzi iibhola ze-EPS 2-4mm njengoko imithombo yeendaba yokuhluza ilunge kakhulu, iya kunxibelelana namanzi ngcono.
ubungakanani obuqhelekileyo: 0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 0.8-1.2mm 0.8-1.6mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm 10-20mm
I-EPS luhlobo lwepolymer elula, akukho mbane uhleliyo, akukho sandi, ukuziva okuhle kwesandla, ukungabinetyhefu, ukudodobalisa idangatye, ubungakanani beesuntswana ezifanayo, kunye nokuphinda kusetyenziswe kwakhona. Iqaqambile kwaye imhlophe njengeqhwa, ijikeleze njengeeperile, inombala kwaye iyaqina, ayinakonakala lula, inomoya ovumayo, ikulungele ukuhamba, kwaye inobuhlobo kwindalo kwaye isempilweni. Yinto efanelekileyo yokuzalisa izinto zokudlala iibhegi zeebhontshisi, u-U uhlobo lomqamelo wenqwelomoya njalonjalo. 0.5-1.5mm, 2-4mm, 3-5mm, 7-10mm njalo njalo.
Kwibhodi ye-foam yekhonkrithi engasindi:
Iintsimbi ze-eps ze-foam zingadibanisa nekhonkrithi ukwenza ibhodi yekhonkrithi engasindi, inefuthe elifanelekileyo lokuvala.
Egqithileyo Ibhokisi ye-EPS Foam
Okulandelayo: Lyu umatshini amagwebu yokutshiza